Monday, August 20, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Y’oburu na ichoro ka ndi ahia n’ile ahia mgbasa ozi banyere oru ha. Hubspot weputara ihe omuma ihe omuma iji gosiputa ufodu ihe si na ndi mmadu 6,491 zaghachiri na nyocha nke Moz. E wepụtara data na a nkwonkwo webinar n'etiti Hubspot na Moz taa. Otu ihe na-adọrọ mmasị, 44.4% nke ndị na-aza ajụjụ nyocha kwuru na ọkwa ọkwa ha na mgbasa ozi mmekọrịta dị na advanced or ọkachamara larịị!
Infographic si: Ngwongwo Ahia HubSpot. Ngọnarị: Anyị bụ ndị mmekọ nke HubSpot.
Tags: mgbasa ozi mmekọrịtaokpokoroseomozonye soshal midiannyocha mgbasa ozi mmekọrịta
Ewebata WordPress Teleport